I-Bauxite ilitye lokudakumba elinomxholo ophezulu we-aluminium - ividiyo
Thenga i-bauxite yendalo kwivenkile yethu
I-Bauxite lilitye elinyukayo nelinomxholo ophezulu we aluminium. Ngumthombo ophambili we-aluminium kunye ne-gallium. I-Bauxite iqulethe ikakhulu i-aluminium yamaminerali gib site, i-boehmite kunye ne-diaspore, ixutywe ne-iron oxides Goethite kunye ne-hematite, i-aluminium yodongwe yamaminerali kaolapheli kunye nezixa ezincinci ze-anatase kunye ne-ilmenite.
Iindlela ezininzi zokuhlelwa ziye zacetywa nge-bauxite.
I-Vadász (1951) eyahluliweyo ye-baiteksite (isilika) evela kwi-karst bauxite ores (ikhabhoni):
Iicarbonate bauxites zenzeka ubukhulu becala eYurophu, eGuyana, naseJamaica ngaphezulu kwamatye e-carbonate (ilitye nelitye le dolomite), apho zenziwa ngoxinzelelo lwemozulu kunye nokuqokelelwa okuseleyo kwezingqimba zodongwe ezidityanisiweyo - izacholo ezazisasazeke ezazigxunyekwe ngokuthe ngcembe ngexesha lokuchithwa kwamachiza kwimozulu yekhemikhali .
Amatye amatye anqabileyo afunyanwa kakhulu kumazwe ashushu. Zenziwe ngokufakwa kamva kwamatye ahlukeneyo esilitye njenge granite, gneiss, basalt, syenite, kunye neshale. Xa uthelekisa amatye atyebileyo yintsimbi, ukwakhiwa kwala matye kuxhomekeke nangakumbi kwiimeko zemozulu ezinzulu kwindawo enomhlaba olungileyo. Oku kwenza ukuba ukugqitywa kwe-kaollimited kunye nokuchaneka kwe-gib site. Iindawo ezinomxholo ophezulu we-aluminium zihlala zibekwe ngaphantsi komaleko womhlaba otyhafileyo. I-aluminium hydroxide kwiidipozithi ze-baitxite zeanitic iphantse yodwa.
Kwimeko yaseJamaica, uhlalutyo lwamva lomhlaba lubonise amanqanaba aphezulu e-cadmium, ecebisa ukuba i-bauxite isuka kwi-deposits ye-ash yaseMiocene evela kwii-episode zentaba-mlilo ebalulekileyo kuMbindi Merika.
IOstreliya ngowona mveliso mkhulu weBauxite, kuze kulandele iTshayina. Ngo-2017, i-China yayiyeyona mveliso ephezulu yealuminiyam ephantse ibe sisiqingatha semveliso yomhlaba, yalandelwa yiRussia, Canada ne India. Nangona ibango le-aluminium lisanda ngokukhawuleza, iindawo ezaziwayo zamatye alo zanele ukuhlangabezana neemfuno ze-aluminium kwihlabathi lonke kangangeenkulungwane. Ukunyuswa kokuphinda kulungiswe kwakhona kwe-aluminium, enesibonelelo sokunciphisa iindleko kumbane wombane ekuveliseni i-aluminium, iya kukhulisa ngokufanelekileyo ugcino lwehlabathi.
Ilitye leBauxite lingasetyenziselwa ukucamngca, kwaye oku kunokuba luncedo ukukunceda ufumane iimpendulo kwiimeko ezinokuba malunga nawe.
Isenokukuvumela ukuba uziqonde iinjongo zabanye. Kuyaziwa ukunceda ukudala ukonyuka kweemvakalelo zokonwaba kunye nokwandiswa kokuphila.
Ayisebenzi ngoko nangoko kodwa ukuba igcinwe kwindawo ekufutshane, amandla ayo asebenza ukukhuthaza ixesha elingaphezulu kwesiqhelo.
Ngokukunceda ukuba ukhulule imiba yovakalelo ekuthintelayo ekufezekiseni into oyinqwenelayo, inokukunceda ukhuphe iimvakalelo ezikubangela uzive unomsindo okanye unentiyo malunga neemeko zobomi bakho.
IBauxite, evela eOstreliya